BARACK OBAM KU TILMAAMAY WAX WANAGSAN XIDHIIDHKA B.AFRIKA IYO MARAYKANKA | Toggaherer's Weblog
BARACK OBAM KU TILMAAMAY WAX WANAGSAN XIDHIIDHKA B.AFRIKA IYO MARAYKANKA
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in dawladiisu ay taageero dhaqaale u fidinayso sidii loo horumarin lahaa dadyowga ku nool bariga Afrika, isla markaana xidhiidh wax wada qabsi iyo saaxiibtinimo ay ula yeelan lahaayeen wadanka Maraykanka.
Madaxweyne Obama ayaa warqad uu usoo diray xoghayaha ururka dadyowga bariga Afrika Amb. Juma Mwapachu waxa uu kaga waramay in la helo jawi kalsooni oo ay ku wada shaqayn karaan dadyoka bariga Afrika iyo Maraykanka, kaas oo gacan ka geysanaya sidii loo heli lahaa degenaansho iyo xidhiidh saaxiibtinimo oo lagu gaadhi karo sidii loo heli lahaa duni nabdoon.
Mr. Obama waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay suuq xor ah oo ay wadaagaan dalalka bariga iyo badhtamaha Afrika, kaas oo ka qayb qaadan kara horumarka Afrika.
Ururka dadka Bariga Afrika iyo dawladda Maraykanka ayaa bishii August ee sannadkii hore wada gaadhay heshiis ganacsi iyo maalgelineed.
Sida lagu sheegay war laga soo saaray xarunta ururka dadyowga bariga Afrika (EAC), waxa uu heshiiska ay labada dhinac wada gaadheen albaabada u furayaa dhiirigelin dhinaca maalgashiga ah oo ay dawladda Maraykanku siiso wadamada Afrika, kaas oo ay ku jiraan ganacsiga iyo dalxiiska.
Laga soo bilaabo sannadkii 2006 wakaaladda ganacsiga u qaabilsan Maraykanku waxay taageero horumarineed u fidisay ururka dadyowga bariga Afrika.
Hadii ay u suurto gasho Mr Obame qorshahaas uu wadaa waxay noqonaysaa mid isku xidhi karta wadamada bariga africa taas oo hadeerto aad u liita xag dhaqaale iyo nabad galyoba.